प्रचण्डले बनाए मन्त्री छान्ने यस्तो अनौठो मापदण्ड, निकटस्थहरु नै चकित ! — Imandarmedia.com
प्रचण्डले बनाए मन्त्री छान्ने यस्तो अनौठो मापदण्ड, निकटस्थहरु नै चकित !
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर निकै तनावमा छन् । उनले केही दिनअघि आफुलाई परेको यो समस्याबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिइसकेका छन् ।
उनले मन्त्री बन्ने आकांक्षी बढी भएकाले यही कुराले लिएर टाउको दुखेको समेत जनाइसकेका छन् । सरकार बनेको २७ दिन भइसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । अरुबेला तत्कालै निर्णय गर्ने माओवादीसमेत यसपालि अलमलमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको परमादेशको आधारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । देउवालाई प्रचण्डको पार्टीको मुख्य समर्थन रहेको थियो ।
गठबन्धनको यो सरकारमा माओवादीले झण्डै ७ वटा मन्त्रालय पाउँछ, जसमध्ये २ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । अब बाँकी रहेका ५ वटा मन्त्रालयमा कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर प्रचण्डले अझै निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
मन्त्री छान्ने विषयमा निर्णय गर्न भनेर बोलाइएको कतिपय बैठक पनि निश्कर्षविहीन भएका छन् भने कहिलेकाँही बैठक नै स्थगित पनि भएको छ । प्रचण्डले सकेसम्म प्रदेश, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र भूगोललाई समेटेर मन्त्री बनाउने योजना बनाएका छन् । उनले पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका र अहिलेसम्म मन्त्री नबनेकालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको समाचारस्रोतले जनाएको छ ।
स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन् । पार्टीको बैठकबाट निश्कर्ष निकाल्न नसके पार्टीले मन्त्री छान्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रचण्डलाई नै दिने छ, यो यसअघि पनि भएको थियो । माओवादीमा ४९ जना सांसद रहेका छन्, त्यसमध्ये २ जना अहिले मन्त्री छन् ।
माओवादीबाट मन्त्री बनेर अन्तिममा रामबहादुर थापा बादलले धोखा दिएर सूर्य रोज्दैँ एमाले भएपछि प्रचण्डले यो विधि अपनाएको स्रोतको भनाई छ । थापा नेकपा विभाजनपछि एमाले भएका थिए, एमाले भएका उनी केही समय बढी मन्त्री बनेका थिए । थापाको राष्ट्रियसभाको सांसद पद गएपछि पनि मन्त्री बनेका उनलाई जेष्ठको पहिलो साता सर्वोच्च अदालतको निर्णयले मन्त्रीबाट वर्खास्त गरेको थियो ।
थापा संविधान अनुसार सांसद नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनाका लागि एकपटक मन्त्री बन्न पाउने सुविधा अनुसार मन्त्री भएका थिए । ओलीले राजीनामा दिएर फेरि सरकार बनाएपछि पनि मन्त्री भएका उनको कार्यकाल सांसद नहुँदा पनि दुइपटक भएको भन्दै सर्वोच्च्ले थापासहित ७ जना मन्त्रीको पद खुस्काइदिएको थियो ।
यो पनि : एमसीसी रोक्न दलबलसहित प्रचण्ड मनाङ छिरेको खुलासाः यसरी बाहिरियो रहस्य, राजनीति नै बन्यो तरंगित !
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसहितको टोलीलाई साथ लिएर शनिबार मनाङ पुगेका दाहालले मनाङको स्थिति हेरेर ‘मन दुखेको’ बताएका छन् । ‘बाढीपहिरोले यतिसाह्रै गरेछ भन्ने जानकारी यही आएर थाहा पाइयो । साह्रै मन दुखेको छ,’ चामेमा आयोजित छलफलमा उनले भने, ‘यो दुःख हामी धेरै हेर्न सक्दैनौं । जतिसक्दो चाँडो बाटो निर्माण हुन्छ ।’
जेठ १४ र ३१ गतेको बाढीपहिरोपछि मनाङ सडक सञ्जाल विच्छेद छ । मनाङमा विद्युत् सेवा पनि अवरुद्ध छ । विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा टेलिफोन तथा मोबाइल सेवासमेतमा समस्या छ । ‘हामी जनताका सबै समस्यालाई छिटो समाधान गर्न खोज्दै छौं । अहिले ५ दलीय गठबन्धनको सरकार छ । हामीमाथि विश्वास गर्नुहोला । हामी छिट्टै सडक बनाउँछौं, छिट्टै बिजुली बाल्छौं ।’
दाहाल र मन्त्री भुसालसहित प्रतिनिधिसभा सदस्य माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, गुरुङ–पत्नी एवं संविधानसभा सदस्य यशोदा सुवेदी गुरुङ, पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन थापा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हितेन्द्र शाक्य, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव कलानिधि पौडेलसहित १७ जनाको टोली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट मनाङ पुगेको थियो ।
सुरुमा मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–१ पिसाङ पुगेको टोलीले अध्यक्ष कान्छा घलेलगायत जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग छलफल गरेको थियो । सदरमुकाम चामेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछाने, गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घलेसहितका जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । ‘हामी यहाँको बाटो छिट्टै बनाउँछौं । विद्युत्को समस्या पनि छिट्टै समाधान गर्छौं,’ आश्वासन दिँदै ऊर्जामन्त्री भुसालले भनिन् । भत्किएका भौतिक संरचना निर्माणमा पनि सरकारले सहयोग गर्ने उनले बताइन् ।
नासों गाउँपालिका–९, दानक्युमा गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घलेसहितका जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग टोलीले छलफल गरेको छ । टोलीले निर्माणाधीन माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजनाका चिनियाँ निर्माण कम्पनी तथा हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीका अधिकारीसँग पनि छलफल गरेको थियो । ‘टोली जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझेर फर्क्यो । यसले मनाङको लाइफलाइनमा रहेको सडक छिट्टै बन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले भने ।
मनाङमा जेठ १४ र ३१ मा गएको बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध छ । बेंसीसहरबाट मनाङको नासों–१, तालडाँडासम्म मात्रै सवारी सञ्चालनमा आएको छ । लघु जलविद्युत्हरू बगाउँदा विद्युत् अवरुद्ध छ । सडकमा बेलिब्रिज, गोरेटो तथा घोडेटोका झोलुंगे पुल बगाएको छ । हाल हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्नलगायत सामग्री ढुवानी भइरहेको छ । बाढीपहिरोका कारण एक हजार बढी विस्थापित भएका थिए । ७० घरमा पूर्ण क्षति पुग्नुका साथै २ सय बढी घरमा क्षति पुगेको मनाङ प्रशासनले जनाएको छ ।